Vamwe Varairidzi Vokanda Mapadza Pasi neNyaya yeMari YekuBatsirika
Varairidzi mune zvimwe zvikoro muHarare nekuBulawayo, vanonzi vari kukanda mapadza pasi vachinyunyuta nedanho riri kutorwa nemamwe masangano anomirira vabereki rekuderedza mari dzekubatsirikana dzavanga vachipa kuvarairidzi nechikonzero chekuti hurumende yakawedzera mihoro yevarairidzi.
Varairidza vazhinji vanga vachipiwa mari dzekubatsirikana dziri pakati pemazana matatu emadhora nemazana maviri emadhora, asi vabereki vari kuti vaona zvakakodzera kuti vachidzikisa mari idzi, mune dzimwe nhambo nemadhora anobva pamakumi mashanu kusvika kumadhora zana nemakumi mashanu.
Vabereki vazhinji vari kunzi vari kubvisa mari dziri pakati pemadhora makumi matatu nemashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamwedzi, zvichienderana nechikoro chinodzidza vana vavo.
Asi sangano rinomirira varairidzi rePTUZ, rinoti danho rotorwa nevabereki iri rinogona kukanganisa gadziriro yebvunzo dzeGrade 7, idzo dzave pedyo kutanga, sezvo varairidzi vanenge vasisashandi nemwoyo wese.
Sangano iri rakagara richishoropodza nyaya yekupa varairidzi mari dzekubatsirikana, richiti vamwe varairidzi, zvikuru vari kumaruwa havasi kuwana mukana uyu.
Sangano reZimta rinotiwo varairidzi havafanirwi kupedzera shungu dzavo dzekusawana mihoro inovakwanira kuvabereki, asi kuti vanangane nehurumende yakavapinza basa.
Zimta ino kurudzirawo vabereki kuti vanangane nebudiriro dzezvikoro, vasiire hurumende nyaya dzekubhadhara varairidzi.
Mumwe mudzidzisi anodzidzisa muHarare asina kuda kudomwa nezita, audza Studio 7 kuti danho rakatorwa nevabereki pakutanga rekuda kupindira mukuvabhadhara rinofanirwa kuzadziswa kusvika varairidzi vave kutambiriswa mari dziri pamusoro pePoverty Datum Line.
Mumwe mubereki ane vana vanodzidza paKuwadzana 6 Primary School muHarare, VaKurauone Chihwayi vabereki pavakazvipira kubhadhara mari idzi Havana kumbobvira vati vachabhadhara kusvika madhongi amera nyanga.
Hurukuro naVaKurauone Chihwayi pamwe nemumwe mudzidzisi